धनगढी प्रिमियर लिग खेल्ने छ टोलीको घोषणा, को-को छन् कप्तान ? - Nepal Cricket
धनगढी प्रिमियर लिग खेल्ने छ टोलीको घोषणा, को-को छन् कप्तान ?
सर्वाधिक पुरस्कार राशीको धनगढी प्रिमियर लिग खेल्ने छ टोली र कप्तान घोषणा भएको छ ।
विभिन्न शहरका टोलीहरुलाई फ्रेन्चाइज गरेर चैत ५ देखि १९ गतेसम्म्म धनगढीमा प्रतियोगिता गर्न लागिएको हो । प्रतियोगिताका लागि सीबाईसी अत्तरिया, बिराटनगर किङ्स, काठमाडौं गोल्डेन्स, रुपन्देही च्यालेन्जर्स, कञ्चनपुर आइकोनिक र टिम चौराहा धनगढी गरी छ टिम छनोट गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
अत्तरियाको कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, विराटनगरको शरद भेषावकर, काठमाडौंको बसन्त रेग्मी, रुपन्देहीको शक्ति गौचन, कञ्चनपुरको विनोद भण्डारी र धनगढीको पारस खड्का कप्तान छन् । लक्की ड्रबाट कप्तान छनोट गरिएको हो र उनीहरुले समान १ लाख ५० हजार पारिश्रमिक पाउनेछन् ।
धनगढी पि्रमियर लिगका लागि २१७ खेलाडीले नाम दर्ता गराएका छन् र किनबेचका लागि २३ गते अक्सन हुनेछ । नेपाल क्रिकेट प्लेयर्स एशोसिएसनसँगको सहकार्यमा खेलाडीहरुलाई चार समूहमा बर्गीकरण गरिएको छ । जसमा राष्ट्रिय टोलीमा रहेका र देशका लागि १५ भन्दा बढी खेल खेलेका क्रिकेटरको न्यूनतम मूल्य ५० हजार राखिएको छ । १५ भन्दा कम खेल खेलेका थगन यू-१९ क्रिकेटरको ३० हजार र पूर्व यू-१९, यू-२३, यू-१७, यू-१६ र यू-१५ खेलाडीको न्यूनमत मूल्य २५ हजार राखिउको छ । राष्ट्रिय टोलीमा नपरेका खेलाडीहरुको न्यूनतम मूल्य २० हजार छ ।
टी-२० फर्याटको प्रतियोगिताको लिग चरणमा प्रत्येक टिमले एक आपसमा एकएक खेल खेल्नेछन् । शीर्ष चार टोली प्ले अफमा पुग्नेछ । त्यसमा पहिलो र दोस्रो टिमको विजेता फाइनलमा पुग्नेछ भने पराजित हुने टोलीले तेस्रो र चौथो हुने टिमसँग खेल्नेछ र यसको विजेता पनि फाइनलमा पुग्नेछ । विजेताले १५ लाख पाउनेछ भने उपविजेताले ७ लाख पाउनेछ ।